» War deg deg ah: Ms Caasho Gelle oo Gabi ahaanba iska Casishay Xilkii Gudoomiyaha dhawaan loo dhiibay ka….
War deg deg ah: Ms Caasho Gelle oo Gabi ahaanba iska Casishay Xilkii Gudoomiyaha dhawaan loo dhiibay ka….
May 6, 2015 - jawaab
ShareWararka aan ka helayno Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, ayaa ku waramaayo in Guddoomiyihii Guddiga Dib u eegista Dastuurka Soomaaliya oo halkaasi Shir jaraa’id ku qabatay ay iska casishay xilkaasi.
Caasho Geelle Diiriye, ayaa shirkeeda jaraa’id ku sheegtay sababta ay isku casishay inay tahay in howsha Dastuurka oo ah howl culus iyo waqtiga ka dhiman sanadka 2016-ka oo aad u yar iyo caqabado kale oo ay sheegtay inay ku hor gudban yihiin arimaha socod siinta Dastuurka Soomaaliya.
Marwo Caasho Geelle Diiriye ayaa tilmaamtay inaysan jirin cid si gaar ah ugu cadaadisay is casilaadeeda, balse iyada ay xal u aragtay inay ka tagto xilkaasi.(Hiiraanka.com)
“Waxaan maanta caddeynaya inan baneeyay ka mid ahaan shiyaha guddiga madaxa banaan ee dibu eegista iyo dhameystirka dastuurka KMG ah ee dalka,annigo idin sheegaya inaysan cidna ugu cadaadin inan xilka baneeyo ayaan haddana go’aansaday,waxaan u mahadcelinaya cid walba oo i taageertay iyo shacabka Soomaaliyeed.” Sida waxaa sheegtay Caasho Geelle Guddoomiyihii Guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka.
Caasho Geelle oo kol hore Saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay inaysan jirin cid taageerto Guddiga, sidoo kalena aysan laheyn xafiisyo ay ku shaqeeyaan, waxa ayna saluugsaneyd howsha Guddiga iyo taageero la’aanta Dowladda Federaalka Soomaaliya.